Amaphilisi Amakhodlela we-pods La Bottega del Caffè - S.Pietro Clarenza
Ikhofi yepharadesi konke kuwe
I-Bottega del Caffè e-Via Umberto 66 a San Pietro Clarenza esifundazweni Catania ukuthengisa Amakhofi ekhofi, Amakhofi Amakhofi e Imishini yekhofi yamahhala ukungalokothi ushiye isiphuzo sakho osithandayo, nganoma yisiphi isikhathi sosuku!
Ama-Cods Capsules La Bottega del Caffè eSan Pietro Clarenza - Okwangempela futhi Kuyavumelana
I-Bottega del Caffè inokukhetha okukhulu esitolo sayo Amakhofi ekhofi e Amakhofi Amakhofi. Inayo kukho konke ukunambitheka: kusuka ku-100% i-robust blends to 100% Arabica, kuze kufike ezinhlotsheni ezahlukahlukene ze-decaffeinated. IBourbon, Espresso Point, Nespresso izibonelo ezimbalwa nje Amakhofi ekhofi e Amakhofi Amakhofi ukuthi ungathola njalo ukutholakala ukuhlangabezana nezidingo zakho. Ulindeni? Nakanjani kuzoba khona Amakhofi ekhofi e Amakhofi Amakhofi ufuna! Ngaphezu kwalokho, uzothola amamodeli amaningi we Imishini yekhofi yamahhala.
Ama-Cods Capsules La Bottega del Caffè eSan Pietro Clarenza - Imishini esebolekiswe ukusetshenziswa
I-Bottega del Caffè e-Via Umberto a San Pietro Clarenza esifundazweni Catania ihlinzeka Imishini yekhofi ngemalimboleko ongayisebenzisa futhi ungathenga nenombolo ye Amakhofi ekhofi e Amakhofi Amakhofi ufuna, ngaphandle kwezibopho zaluphi uhlobo. I-Bottega del Caffè eSan Pietro Clarenza esifundazweni Catania kuyinkomba yezindawo zabantu be Imishini yekhofi nokunikela kwakhe okungapheli kwe Amakhofi ekhofi e Amakhofi Amakhofi kuko konke ukunambitha kanye nezabelomali.
Imishini Yekhofi Ekulula La Bottega del Caffè - Ophezulu esifundazweni saseCatania
Amakhofi ekhofi e Amakhofi Amakhofi esifundazweni saseCatania? Kusukela kuvulwa, I-Bottega del Caffè ikwazile ukuvuza amakhasimende ayo esikhathi esizayo ngokukhushulwa ku Amakhofi ekhofi, Amakhofi Amakhofi e Imishini yekhofi futhi iyaqhubeka nokunakekela amakhasimende ayo athembekile nsuku zonke ngonyaka ngamanani avelayo nezaphulelo zenani. Hlala phezulu Amakhofi ekhofi e Amakhofi Amakhofi a I-Bottega del Caffè a San Pietro Clarenza esifundazweni Catania uma ufuna ukusindisa. Ngamehlo ngaso sonke isikhathi kuphothifoliyo, lesi sitolo asisoze sidumaze okulindelwe yilabo abanquma ukuthenga i I-Bottega del Caffè.
Ama-Cods Capsules La Bottega del Caffè eSan Pietro Clarenza - Ukulethwa kwezidingo ekhaya
I-Bottega del Caffè e-Via Umberto 66 a San Pietro Clarenza esifundazweni Catania ucabange wonke umuntu. Uyafuna Amakhofi ekhofi e Amakhofi Amakhofi ekhipha lonke iphunga elinamandla lokuhle Caffè I-Italian? Noma unezinkinga Imishini yekhofi? Cabanga ngakho I-Bottega del Caffè. Ngensizakalo yasekhaya yamahhala yamazwe angomakhelwane, ulethe ekhaya lakho Ama-Waffles e Amakhofi Amakhofi i-classic noma enongiwe ngoshokoledi, i-ginseng, i-hazelnut, i-mokaccino, itiye likalamula, i-chamomile, amajikijolo, Caffè emhlabathini nokunye okuningi. Iyalungisa futhi ithengise Imishini yekhofi ngesicelo. Sebenzisa ithuba le-360 degree service I-Bottega del Caffè eSan Pietro Clarenza esifundazweni Catania.
Ikheli: Nge-Umberto I, i-66
Idolobha: S. Pietro Clarenza
Umakhala ekhukhwini: 346 9476351
Umakhala ekhukhwini: 392 1969637
Inombolo ye-VAT: 05346410870
Eminyakeni engu-4 edlule
Ukwamukela ngokushesha, okuwusizo futhi kuchwephesha kakhulu. Inani lemali SUPER EXCELLENT! ihlinzeka ngaso sonke isidingo